Ukuqonda ukuveliswa kweMfuno vs ukuKhokelela kwesiZukulwana | Martech Zone
Ukuqonda ukuveliswa kweMfuno vs ukuKhokelela kwesiZukulwana
Abathengisi bahlala betshintshiselana ngokwemfuno zokuveliswa kwemfuno (imfuno gen) yokuvelisa okukhokelayo (uhlobo olukhokelayo), kodwa ayizizo iindlela ezifanayo. Iinkampani ezinamaqela athengisa ngokuzinikela zinokuhambisa zombini iindlela ngaxeshanye. Iinkampani zihlala zinefayile ye- Iqela lokuthengisa elingenayo ukuphendula imfuneko zivelise izicelo zokuthengisa kunye Amaqela athengisayo aphumayo Ukuzibandakanya kwezo zikhokelo zivelisiweyo ukukhokela imisebenzi yokuvelisa.
Ukuba uguquko lunokusetyenziswa kwi-Intanethi ngaphandle konxibelelwano nenkampani, ukuveliswa kwebango kubalulekile ekuqhubeni ulwazi, ukuthembela, kunye negunya kwiimveliso nakwiinkonzo zakho. Ukuba uguquko lwakho lufuna ukuthengisa, uthethathethwano, okanye umjikelo wentengiso omde, ukukhokelela kwisizukulwana kubaluleke kakhulu ekujoliseni nasekufumaneni intengiso efanelekileyo ekhokelela ekukhuliseni ukuya esiphelweni.
Yintoni iMfuno yesiZukulwana
Ukuveliswa kwebango kuqhuba ulwazi kunye nomdla kwimveliso kunye neenkonzo zenkampani. Injongo kukuba Qhuba ishishini elivaliweyo Unxibelelwano oluncinci nomthengi okanye ishishini onomtsalane kulo.
Kwimeko yokuveliswa kwemfuno, unokuba nomsindo ngakumbi ekuqhubeni ithemba ngomjikelo wentengiso kwaye ubafumane ngokuthe ngqo kuguqulo.
Yintoni iNkokeli yesiZukulwana
Isizukulwane esikhokelayo siqhuba inzala okanye uphando kwimveliso okanye iinkonzo. Injongo ngu Ukuqokelelwa konxibelelwano olufanelekileyo ukwakha ubudlelwane kunye nokondla kude kuvalwe njengomthengi.
Xa usasaza ubuchule bokuvelisa, unokuba ndlongondlongo ngakumbi ekuqokeleleni ulwazi lokunxibelelana ukuze wakhe ukuthembana kwaye uzibandakanye nethemba ekuhambeni kwexesha. Ewe kunjalo, awufuni ukuphazamisa okanye ukucothisa umdla wokukhokela ekuvalweni kweshishini nawe. Khokelela amanqaku kubalulekile - ukuqonda ukuba ngaba ukhokelo lulungile, unohlahlo-lwabiwo mali olukhoyo, lusondele kwisigqibo sokuthenga. Imijikelezo yokuthengisa emide, ukubandakanyeka kwamanyathelo amaninzi, kunye nokuthengiswa kwamashishini kufuna isicwangciso sokukhokela kunye nenkqubo.
Inkqubo inokufana kakhulu, kwaye amaqhinga anokufana phakathi kwezi ndlela zimbini. Umzekelo, ndisenokuqhubeka ndikhangela ubundlongondlongo, isicwangciso sentlalontle kunye ne-PR yokwakha ulwazi kunye nokuqhuba nokuba yimfuno okanye ukukhokelela. Ndingaphuhlisa i-infographic okanye i-whitepaper enceda ukukhulisa ukukhokela okanye ukukhuthaza isigqibo sokuthenga. Ukuba ndizama ukuvelisa izikhokelo, nangona kunjalo, ndingabeka ugxininiso ngakumbi kubuchwephesha benkampani kunye nendlela yokuseka ubudlelwane phakathi kwexesha elide elinokubakho ngobuchule.
Impumelelo okanye imilinganiselo ingahluka phakathi kwezi zicwangciso zimbini, nangona kunjalo. Kuba ukuveliswa kwebango, Ndinokuba ndijolise ngakumbi ekufikeleleni kwintengiso yam kunye notshintsho olunokubangela. Kuba isizukulwana esikhokelayo, Ndinokuba ndijolise ngakumbi kubungakanani bokukhokelela kwintengiso efanelekileyo. Ngelixa iqela lentengiso linokuthi lithathe uxanduva lwaso nasiphi na isicwangciso, liqela lokuthengisa elibambe uxanduva lokuvala ishishini ngesicwangciso esiliqili sokuvelisa. Iqela lentengiso linoxanduva lobungakanani kunye nomgangatho wokhokelo olunikezelweyo.
tags: ukuveliswa kwebangoukufuna ukuveliswa kuthelekiswa nokukhokelela kwisizukulwanaibango kuthelekiswa nelotheIntengiso engenayoisizukulwana esikhokelayoIsizukulwana esikhokelayo xa kuthelekiswa nesidingo semfunokhokela ngokuchasene nemfunoIntengiso ephumayo
Ingcaciso ngeeNgcebiso ngeMveliso yeVidiyo kunye neentlobo
Juni 23, 2017 ngo-8: 26 PM
Inqaku elihle. Enkosi ngokucacisa umahluko phakathi kwezi zimbini!